မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခမ်းအနား နှောက်ယှက်တားဆီးတဲ့လုပ်ရပ်၊ နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်တွေကို တုန့်ပြန်ရတာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ချားလ်စ်ဘို ဘယ်လို မိန့်ကြားထားပါလဲ။ ကိုကျော်ကျော်သိန်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ကာဒီနယ်ကြီး အခုလို VOA ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပြုတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ကြားရတဲ့ သတင်းတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုက်ပွဲတွေကလည်း လုံးလုံးရပ်သွားတယ့်အခြေအနေတော့ မရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့  ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကာဒီနယ်ကြီးရဲ့  မျှော်လင့်ချက်စကားလေး မိန့်ကြားပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ ဒီလိုမျိုး VOA ကတဆင့် ကောင်းတဲ့သတင်းလေးတွေ ဖြန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာတော်အနေနဲ့ ဝမ်းသာတယ်၊ ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်။ ဒီလိုမျိုး အခွင့်အရေးရတဲ့အခါ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် သတင်းကောင်း ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိသလို၊ အဆင်မပြေတဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေမရပ်ဘူး ပစ်ခတ်နေကြတယ်။ တပ်မတော်နဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ခရီးတွေလည်း ဖြတ်ကျော်လာရတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရပ်ပိုင်းလေးတွေမှာပဲ တပ်မတော်ကာချုပ်ကိုယ်တိုင် ကြေညာချက်တွေထဲမှာ လေးလတာ ပစ်ခတ်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးကို စလျှောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းကို ကြားရတဲ့အခါမှာ သူတို့အားလုံး ပျော်ကြတယ်။ ပြည်သူပြည်သားတွေ ပျော်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် စစ်ရှောင်စခန်းမှာ နေကြတဲ့လူတွေအတွက် အတော်ကိုပျော်တဲ့သတင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ ငါးနှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခုနှစ်နှစ်ထဲကို ရောက်လာပြီ။ မနှစ်က သူတို့နဲ့ သွားတွေ့တုန်းက ကျနော်၊ ကျမတို့ရဲ့  အနာဂတ်က ဘာလဲလို့ မေးတဲ့လူတွေ ဒီလိုမျိုသတင်းကြားတဲ့အခါမှာ သိပ်ကိုပျော်ကြမယ်။
အဲဒီတော့ ဒီခရီးလမ်းစဉ်ကို တပ်မတော်ကိုယ်တိုင်က လမ်းဖွင့်ပေးတယ်။ သူကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ တက်ညီလက်ညီနဲ့ စားပွဲဝိုင်းမှာ ဆွေးနွေးပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရဖို့အတွက်က အရေးကြီးရုံမက ကြိုးစားသွားကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လူဆိုတာက တခါတလေ အတိတ်ကို ပြန်တွေးချင်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် အတိတ်ရဲ့  အဆင်မပြေမှုတွေ၊ နာကျည်းမှုတွေကို စားမြုပ်ပြန်ချင်ကြတဲ့အခါမှာ အင်္ဂလိပ်လိုအဆိုရှိတယ် They want that … the past as no future. အတိတ်က အဆင်မပြေမှုတွေကို မေ့နိုင်ပြီးတော့ နှစ်သစ် ၂၀၁၉ မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ကြိုးစားဖို့ရန်အတွက် ဆရာတော်အနေနဲ့ ဆန္ဒပြရုံတင်မက၊ အောင်မြင်မယ်လို့ ဆုတောင်းထားပါတယ်။ အားလုံးကလည်း ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ဆုတောင်းနေကြမှာ၊ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်သလို၊ ဆန္ဒအသစ်၊ စိတ်သစ်နဲ့ အထူးသဖြင့် ယုံကြည်မှုအသစ်နဲ့ ဆက်လက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက် အလွန်ပဲဆန္ဒရှိတယ်။ အောင်မြင်မယ်လို့လည်း ဆရာတော်အနေနဲ့ အောင်မြင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်တခုကတော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အလားတူပါပဲ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေ၊ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကလည်း အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါ ဒီအခြေအနေမှာ။ ကာဒီနယ်ကြီးအနေနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေး၊ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ပတ်သက်တဲ့ ကာဒီနယ်ကြီးရဲ့  ဆန္ဒမျှော်လင့်ချက်စကားလေးလည်း ပြောပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ ဆရာတော်အနေနဲ့ အားလုံးစိတ်ကောင်းနှလုံးသားကောင်းနဲ့ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး သူများဘာသာကို ရိုသေနိုင်ခြင်း၊ သူများဘာသာကို လေးစားခြင်းနဲ့ သူများဘာသာတွေရဲ့  ရှုထောင့်ကို ရိုသေစွာနဲ့ နားထောင်နိုင်ခြင်းတွေဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ လူဆိုတာကတော့ အဆိုရှိတယ် - ခေါင်းနှစ်လုံးရှိရင် အကြံဥာဏ်နှစ်ခုလည်း ရှိနိုင်တယ်။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမှာလည်း အသီးသီးကွဲပြားပေမယ့် Difference is not the weakness. ကွာခြားနားမှုဟာ အားနည်းချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ Weakness to be strength - မတူခြားနားမှုဟာ ခွန်အားဖြစ်တယ်ဆိုတာ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်မှာ တကယ့်ကို ရောင်စုံသက်တန့်လိုပဲ လှပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီလိုမျိုး ဘာသာပေါင်စုံမှာ တဦးနဲ့တဦး၊ တခုနဲ့တခု လေးစားတယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်သွားစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ Peace is possible and peace is only way. ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတခုသာလျှင် မြန်မာပြည်အတွက် လမ်းကြောင်းလမ်းစဉ် ဖြစ်တယ်။
မေး ။ ။ နောက်တခုက ပြီးခဲ့တဲ့ ခရစ်စမတ်ကာလ၊ ခရစ်စမတ်ရက်မတိုင်ခင် ကျနော်တို့တွေ သတင်းကြားပါတယ်။ ခရစ်စမတ်ပွဲတော် ဆင်နွှဲဖို့ ပြင်ဆင်ကြတဲ့ မိသားစုတွေကို ပြည်နယ်ဘက်မှာပါ - တခြားလူတွေက နှောက်ယှက်ပြီးတော့ ခရစ်စမတ်ပွဲတော် ကျင်းပတာကို တားဆီးတယ်၊ နှောင့်ယှက်တယ်၊ ရုန်းရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ကြတယ်၊ ဒဏ်ရာရကြတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေပေါ် ကာဒီနယ်ကြီး ဘယ်လိုမိန့်ကြားချင်ပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒီမှာ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပျက်တာတွေ ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဖြစ်ပျက်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒီဟာက ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တဲ့လူတွေ Extremists အနည်းစု တကယ်တမ်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်တပြည်လုံးကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ တခြားဘာသာကို ရိုသေလေးစားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိသလို၊ ဒီလိုမျိုး သူများဘာသာကို အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လက်တစုပ်လောက်တောင် မရှိပါဘူး။ အနည်းဆုံး သုံးဦးလေးဦး ဒါမျိုးတွေလုပ်နေ ဖြစ်နေတာကြောင့် ဒါမျိုးတွေအတွက်ဆို ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့လူတွေကို အသိပညာ education ဆိုတာ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့လူတွေက တကယ်တမ်းဆိုရင် မသိတဲ့အတွက်၊ Ignorance ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဒီလိုမျိုး တခြားဘာသာတွေပေါ်မှာ အနှောင့်အယှက်သဘောမျိုး ဖြစ်တာပါ။
ဘယ်သူမဆို နှလုံးသားထဲမှာ ဘာသာတိုင်းက ကိုယ့်ဘာသာဟာ အမွန်မြတ်ဆုံးထားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဘာသာသူ့ဘာသာ အပေးအယူ Mutual ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဖြစ်ပျက်တာတွေကတော့ အဖွဲ့အုပ်စုကြီးကို အပြစ်ဖို့ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီလိုမျိုး အနည်းစုလေးရဲ့  အသိတရားမရှိမှုလေးပေါ်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်းတရားနဲ့ ဒီလူတွေကိုပါ ဘယ်သူပဲဖြစ်စေ စည်းရုံးနိုင်ဖို့ မေတ္တာပြနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်ဆုံးကြတော့ မေတ္တာဟာ အနိုင်ရမှာပါ။ ဒုတိယသမ္မတကြီး ဟန်နရီ မိတ်ဆုံစားပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့တဲ့စကား - မင်းပညာရှိဆိုလား၊ ဘုရင်ဆိုလား သူတို့လာပြီးတော့ ခရစ်တော်ရှေ့ မှာ ရှိခိုးကြတယ် - မင်းပညာရှိပဲ ပြောမလား၊ မင်းပဲပြောမလား ဘယ်လောက်ပဲ ပညာရှိနေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ အာဏာရှိနေပါစေ နောက်ဆုံးကြတော့ မေတ္တာရှိတဲ့ သခင်ခရစ်တော်ရှေ့ မှာ ဒူးထောက်ရှိခိုးကြတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ မေတ္တာပြရင် မေတ္တာဟာ နောက်ဆုံးကြတော့ အောင်မြင်မှုကို ရရှိမယ်လို့ ဆရာတော်က ယုံကြည်ပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်တခုက ကာဒီနယ်ကြီးက နိုင်ငံခြားခရီးတွေလည်း မကြာခဏ သွားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ မကြာခဏ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာ အခုဆိုရင် အာရှမှာလည်း ..ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပြည်ပကလူတွေရဲ့  တချို့ အမြင်တွေ မရှင်းလင်းမှုတွေ။ မြန်မာနိုင်ငံပေါ် အမြင်စောင်းနေတာလေးတွေကို ကာဒီနယ်ကြီး ဘယ်လိုကြုံတွေ့ရပါလဲ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုမျိုးကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပြောဆိုရတာတွေ ရှိပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံခြားသွားတိုင်း မြန်မာပြည်လို့ ပြောလိုက်ရင် အမြဲတမ်းထွက်လာတဲ့ စကားတွေက ဘာလဲဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းပြောတယ်။ သူတို့သုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းက ရိုဟင်ဂျာ လို့ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်ပေါ် Genocide, Ethnic Cleansing တို့ လူမျိုးရေးဖြုတ်တဲ့ဟာတို့ အများကပြောကြတယ်။ အဲဒီအပေါ် ဆရာတော်အနေနဲ့ ပြန်ဖြေခဲ့တဲ့ အခေါက်ပေါင်းများစွာ အင်တာဗျူးတွေမှာလည်း ပြောပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့  လူမှုဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာက အားနည်းတယ်။ အားနည်းတဲ့အခါ နိုင်ငံခြားမီဒီယာ၊ အသံက ပိုပြီးတော့ ပိုကျယ်တယ်။ Strong media ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောတယ်။ အဲဒီအတွက် အမှန်တရားရဖို့က မြန်မာပြည်ရဲ့ အသံကိုလည်း နားထောင်ဖို့ရန်အတွက် အရေးကြီးတယ်။ ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာ တပ်မတော်ကိုလည်း အပြစ်တင်ကြတယ် ICC အဖွဲ့နဲ့ နောက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း အပြစ်တင်ပြီးနောက် ပြဿနာတွေအားလုံးက သူနဲ့ပဲ ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့ သူပေါ်ပုံချပြီးတော့ သူ့ရဲ့  နိုဘလ်ဆုတွေ၊ ဂုဏ်ထူးတွေအားလုံးကို ပြန်ရုတ်သိမ်းတာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဆရာတော်က မနှစ်တုန်းက တခါပြောဖူးပါတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရရှိတဲ့ ဘွဲ့တွေ၊ ဂုဏ်ထူးတွေ ဒီအချိန်ယူပါဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ သူ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်လေးစားမှု၊ ချစ်ခင်မှုကိုတော့ ယူပြစ်လို့မရပါဘူးလို့ အဲဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ ဆရာတော်က ဘာပြောလဲဆိုတော့ International news, International impressions တွေ ကမ္ဘာက ထင်တဲ့အထင်တွေ၊ အမြင်တွေထက် ဝေဖန်မှုတွေထက် ကိုယ့်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ - အထူးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလို့ရှိရင် အရင်တုန်းကထက် သူ့ရဲ့  Ideology ယူဆချက်တွေက ပိုပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် Opposition Party ဆိုပြီးတော့ သီးသီးသန့်သန့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဦးတည်ချက်က ဘာလဲဆိုရင် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ညီတူညီမျှပေါင်းပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆောက်တည်ဖို့ရာကို ပိုပြီးတော့ အလေးထားလာတယ်။
ဆရာတော် ကိုရီးယားသွားတုန်းက သတင်းပေးတဲ့အခါမှာ တပ်မတော်ရဲ့  ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် ပြောတဲ့အခါမှာ သတင်းထဲမှာပါလာတဲ့အခါမှာ ဒေါ်စုက ပြောတယ် ဒါထက်ပြည်ပသတင်းတွေထက် ကျမတို့က ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင် တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရတို့ ပေါင်းစုဖို့ရာကို ပိုပြီးတော့ အရေးပေးပါတယ်။ အပြင်သွားတဲ့အခါမှာ တပ်မတော်အကြောင်း ကောင်းရာကောင်းကြောင်း ပြောပါဆိုပြီးတော့ သူက ပြောခဲ့တယ်။ အခုကြတော့ တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် လက်တွေ့ဖြစ်နေပြီ တပ်မတော်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးလမ်းစဉ်ကို သွားဖို့အတွက် - အဲဒီတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေက တကယ်လို့ မြန်မာပြည်အကြောင်းကို ဒီလိုမျိုး ထင်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ ဆိုသလို ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ အစိုးရကိုယ်တိုင် ပညာရှိရှိနဲ့ သည်းခံပြီးတော့ သွားနေတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ကာဒီနယ်ကြီး။